Uhlalutyo lwezihloko kunye neMicrostation Geographics -Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Uhlalutyo lwe-Topological kunye ne-Microstation Geographics
Masibone eli cala, ndinenombolo yeepasela kule cadastre, ezichaphazeleka ngumgca wombane ophezulu, ndifuna ukwazi ukuba zeziphi, zizobe ngombala ohlukileyo zize zigcinwe kwifayile eyahlukileyo.
Imaleko inokwenziwa kwizinto ezibonakalayo, oku kunokuba kwiimephu zesalathiso okanye kwifayile evulekileyo. Akukho mfuneko yokuba neprojekthi ivulwe, ukuba ndinezinto ezineempawu endinikiweyo.
Kule meko, ndineprojekthi evulekileyo, kwaye ndibonile iipasela zecadastral apho ndifuna ukwenza uhlalutyo lokuba zeziphi iipropathi ezichaphazelekayo yi-axis yendlela yebhasi.
Uhlalutyo lwezinto ezibonakalayo lwenziwe "ngezixhobo eziluncedo / uhlalutyo lwethopholoji". Kule paneli kuvela ezinye iindlela zokwenza, ukucima, ukutyhila kunye nokongeza umaleko.
Kule meko, ukudala umgca wecala,
Ndiyalisebenzisa inqanaba apho ligcinwe khona (okanye uphawu abanalo),
Ndikhetha uhlobo lomaleko (indawo) nangona inokuba yimigca okanye amanqaku
emva koko ndikhetha igama; Kule meko ke kuya kuthiwa "ngu-Urb1-15"
Apha ngezantsi ndikhetha uhlobo lomgca, gcwalisa umbala kunye nomda. Inokwenziwa ngokusekwe kumbuzo (umbuzo) usebenzisa umbuzo wokwakha okanye ogciniweyo.
Emva koko ndisebenzisa iqhosha "lokudala", kwangoko umaleko wenziwe ngaphezulu, endinokuwubonisa ngeqhosha "bonisa". Okwangoku, olu luhlu lugcinwa kuphela kwimemori kodwa ndinokulugcina njengefayile ye-.tlr enokubizwa nangaliphi na ixesha ... ngaphandle kweprojekthi evulekileyo.
Ukuba ndifuna ukongeza kwimaphu, iqhosha elithi "Yongeza" lisetyenzisiwe, oku kuya kwinqanaba elikhethiweyo kunye nemibala okanye ukuzaliswa kuyabonakala.
Ngendlela efanayo ndenza umaleko "wemigca ephezulu", endikhetha inqanaba elifanelekileyo. Ke sele ndinazo zombini izaleko, into endiyifunayo ngoku kukuhlalutya iipasile ezichaphazeleka lelo banga lebhasi.
2. Uhlalutyo lobeko
Uhlalutyo lwenziwa ngokukhetha "ukugquma / umgca kummandla", emva koko ndikhethe umgca womgca kunye neendawo eziza kuhlaziywa. Okufanayo kunokuba "ziindawo ukuya kwiindawo" okanye "iindawo ukuya kumanqaku" ngamanye amatyala.
Apha ngezantsi ndibonisa enye into endinokuyikhetha ukuba yeyiphi na indawo ekufuneka ndiyigcine njengesiphumo, ndikhetha iziza (iindawo).
Unokukhetha kwakhona indlela yohlalutyo, "ukunqamleza" yeyona nto ilungele nangona zikho ezinye iindlela ezinje ngaphakathi, ngaphandle, zidibana njl.
Ekunene ubhala igama lomaleko obangelwayo kunye nelinye ikhonkco kugcino lwedatha eligcinwe kwiipasile eziphumayo. Igama lomaleko wam liya kuba "Iipropati ezichaphazelekayo"
Ukwenza umaleko endiwukhethileyo "yakha", ngoku ungabona umaleko owenziweyo, ngeenjongo zokubonisa uchukumisa kwaye ucofe iqhosha "bonisa"
Le ndlela ayisekho kwiBentley Imephu, okanye ubuncinci unyango luhluke ngokupheleleyo.